चित्रहरु, रंग पुस्तकहरू, खेल, कविता मा छोराछोरीको संख्या
बच्चा, यो जस्तो थियो, केवल हालै आफ्नो खुट्टा मा प्राप्त गर्ने प्रयास, र आज, चल्छ फड्को, र निरन्तर सोध्छन् प्रश्नहरू दर्जनौँ। उहाँले सबै रुचि छ। त्यसैले, यो दुनिया उहाँलाई चिनाउने समय। धेरै राम्रो, हामी, वयस्क, बिस्तारै बोल्ने, अक्षर, रंग सिकाउने, उहाँलाई सबै कुरा बताउन जाँदैछन् भने। यो सबै बच्चा स्कूल सुरु गर्दा धेरै उपयोगी छ। यस उमेर को बच्चाहरु को लागि तथ्याङ्कले धेरै र राम्रो मात्र खेल भण्डार मतलब छैन। त्यसैले गरेको खेल्दै छोराछोरीलाई सिकाउन गरौं।
शायद एक बच्चा छैन वयस्क पुस्तकहरू पढ्न गर्ने थियो। अब तिनीहरूले धेरै, रंगीन उज्ज्वल र सुन्दर जारी छ। त्यहाँ भारी गरे पुस्तकहरू, खिलौने, आँखा सार्दा जनावर हो जो, र घरहरू पनि छन्। बच्चाहरु सधैं ठूलो खुशी, चित्रहरु मा हेर्न पढाइ mimicking, पृष्ठहरूमा, केही लाइनहरु साथ नेतृत्व औंला को बारी छन्। त्यहाँ ठूलो संख्या बच्चाहरु को लागि देखाइएको छ जसमा धेरै प्रकाशनहरू छन्। यदि डिजाइन सधैं कान्छो लागि सम्झना राम्रो र सही छ किनभने पाठ rhyming, एक सरल राइम सँगसँगै छ यो धेरै सुविधाजनक छ "पाठकहरूलाई।" एक विकल्प:
घाँस एक कालो बिरालो मा लुक्दै,
मुर्ख माउस, उहाँले नास्ता पर्खन्छ।
दुई गाजर जस्तै खैरो खरायो,
बेड यो धेरै चलाखीपूर्ण तान्नुहोस्।
तीन रातो सिंह पंजे पंजे हल्लाउँदै,
मेरो आमा मिठाई र अनाज सोध्नुहोस्।
bunnies को एक - - यो उदाहरण मा, तपाईं बिरालो तपाईँको बच्चा देखाउन सक्छौं दुई, साथै फूल उहाँलाई चिनाउने, हामीलाई जनावर बारेमा अलि बताउनुहोस्।
चित्रा र चित्रहरू
किताब, प्रशिक्षण खाता: त्यहाँ अर्को विकल्प छ। तिनीहरूले नियम, कुनै पाठ छ, वा यसलाई धेरै संकुचित छ, तर, छन् घनिष्ठ-अप, उज्ज्वल र सुन्दर तस्बिरमा संख्या प्रस्तुत। अलिकति बच्चाहरुका लागि, तपाईं तस्वीर हेर्न र तथ्याङ्कले नजिकै धेरै वस्तुहरू देखाइएको कसरी भन्न छोराछोरी अनुरोध गर्न सक्छ किनभने त्यस्ता पुस्तकहरू ठूलो हो। यस्तो कार्य तिनीहरूले सामना गर्न छ। गणना गर्न तिनीहरूलाई सोध्न, र त्यसपछि संख्या कसरी लेख्न देखाउँछ। सत्र को अन्त मा, उनीहरूले कण्ठ छ कि ती नम्बरहरू कल गर्न एक्लै बच्चाहरु हुन सक्छ। तपाईं बताउन समान अंक के प्रत्येक: यो सपना राम्रो हुनेछ। शून्य - एक डोनट, edinichka - एक हंस, र यति मा - पट्टी वा छड, deuce मा।
बिल्कुल सबै छोराछोरीलाई आकर्षित गर्न प्रेम। तिनीहरूले केहि यसलाई के - पिता वा आमाको कागजात क्या त्यो बलपेन कलम मा crayons संग डामर एक नयाँ वालपेपर मा कलम-टिप लाग्यो। निस्सन्देह, तिनीहरूले जहाँ तपाईं तयार बनाएको लूपहरूको को रंग केही वा ट्रेस आवश्यक विशेष किताब, आफ्नै रचनाहरूको सिर्जना गर्न खुसी छन्। छोराछोरीको संख्या द्वारा रङ लगाउन केही व्यावहारिक लाभ छ। पहिले, यो बच्चा क्षति घरेलू सम्पत्ति बिना आफूलाई महसुस गर्न अनुमति दिन्छ, दोश्रो, रंग र संयोजन तत्संबंधी, र तेस्रो, मोटर कौशल विकास, यो यति कडा prettification र चौथो रेखा बाहिर प्राप्त गर्न छैन, राम्रो नेभिगेट गर्न मदत परिचय संख्या को दुनिया मा। तपाईं यो प्रकाशन चयन गर्दा सबै जिम्मेवारी उमेर उपयुक्त बच्चा भनेर याद गर्नुहोस्। उदाहरणका लागि, उहाँले मात्र दस गणना गर्न सक्नुहुन्छ भने, यो आवश्यक छैन अप एक सय नम्बर संग रंग लिन छ। यो बच्चाहरुका लागि हो। साथै, एकदम सानो बच्चा छैन चित्रकला तस्वीर को लागि उपयुक्त, जसमा धेरै सानो विवरण छ। धेरै सजिलो रंग, जसमा तपाईं एउटा सरल पानी आकर्षित गर्न चाहन्छु। यहाँ र उहाँले फोहोर बच्चा प्राप्त गर्दैन, र सबै सफा हुनेछ, र ढाँचा थप वा कम सटीक हुनेछ।
त्यहाँ खेल बिना कुनै बाल्यकाल छ। वयस्क को कार्य - बस एक समय को लागि यो एउटा खेलौना हामीलाई आफ्नो व्यवसाय गर्न, र तिनलाई प्ले थियो कि एक खेल दिन एक मौका दिए बच्चा आफ्नो हात राख्नु, र केहि सिके। धेरै सानो उत्साह पनि पिरामिड को स्तम्भ मा छल्ले stringing प्रक्रिया मास्टर, ब्लक बाहिर टावर निर्माण। पुरानो, तपाईं खाता सिकाउन सक्छ। तिनीहरूले मजा को रूप मा नीरस वर्ण, र मुद्दा गतिविधि सिक्न बाध्य छैनन् भने छोराछोरीको संख्या, ठूलो चासो हो। एक खेल को रूप मा सबै पूर्ण कण्ठ। यी खेल तपाईं कुनै पनि नम्बर विचार गर्न सक्नुहुन्छ। वा केहि जस्तो - उदाहरणका लागि, बालिका लागि यो "किनमेल यात्रा" वा गुडिया खुवाउने (पाँच Dasha तीन चकलेट राखे, र Masha) हुन सक्छ। बालक, तपाईं गढ निर्माण संगठित गर्न (निर्माण सामाग्री कसरी धेरै barricades निर्माण जानेछन् गणना गर्न), वा "समुद्री" प्ले (खजाने गणना, टोलीमा मा वाहन या मान्छे को आवश्यक नम्बर र यति मा। डी सेट)।
अनलाइन खेल मा बच्चाहरु को संख्या
अब लगभग सबैले विभिन्न साइटहरु जहाँ तपाईं बच्चाहरु को लागि खेल को एक महान विविधता पाउन सक्नुहुन्छ घर, एक कम्प्युटर छ। तिनीहरूमध्ये एक बच्चा खाता सिकाउन गर्नेहरूलाई छन्। तिनीहरूलाई सबैभन्दा सरल को सार - क्रममा संख्या मा माउस क्लिक गर्नुहोस्। एक बच्चा गल्ती बनाउँछ भने, स्क्रिनमा छवि देखा वा ध्वनि संगीत सक्छ। विकास र अनलाइन खेल को रूप मा रङ लगाउन। प्रस्ताव बच्चा तिनीहरूलाई को एक प्ले यदि बच्चाहरु को संख्या एक समस्या बन्न छैन। तपाईं आवश्यक सबै -, एक विशेष टोन छनौट एक प्यालेट मा माउस क्लिक गर्न छ। त्यहाँ manipulator प्रयोग हुन "राख्नु" हुनुपर्छ जसमा खेल पनि हो एक फूलदान मा लेखिएको छ, जो, रंग को संख्या वा घरमा प्राप्त गर्न परी-कथा नायक मदत केही संख्या चयन, हो।
प्रशिक्षण को जो तरिका तपाईं चयन तपाईंको रुचि देखाउन आफ्नो बच्चा सकारात्मक परिणाम हासिल गर्न, र बच्चा प्रशंसा गर्न निश्चित हुन: निष्कर्ष मा, म भन्न चाहन्छु!
एक बच्चा एक खेलौना कसरी किन्ने र दिन प्रेम? केटाहरू लागि खेलौनाहरू
कसरी जन्मेका बच्चा राख्न र उनको काखमा उसलाई लिन
किन बच्चाहरू बिस्तारै सोन्छन्? युवा आमाबाबुका लागि सुझावहरू
कस्तो नवजात लागि शरद ऋतु jumpsuit हुनुपर्छ?
बच्चा आफ्नो निद्रामा रो किन छ? - एउटा कारण खोज्दै!
सेतो कोट: के गर्नु पर्छ
शो "फोर्ट Boyard" मा मनपर्ने वर्ण - Passepartout
स्लैग ब्लकहरूको उत्पादनका लागि मिसिनहरू। सिन्डर ब्लकहरूको उत्पादनको लागि उपकरण
वसन्त superfestival BLUBOO! तपाईं मुक्त लागि आफ्नो फोन प्राप्त गर्न 50 संभावना छ!
गर्मी - यो छ ... गर्मी को राशि दहन समयमा जारी छ के?
कला। टिप्पणी संग रूसी संघ को 196 आपराधिक प्रक्रिया कोड
Mowing Ksenia Borodina व्यक्तित्व, प्रस्तोता जोड
Osseyn Rober: ठूलो फ्रान्सेली अभिनेता
Vadim Rabinovich - एक ग्यारेन्टी संग एक यहूदी
पित्त थैली: रोग को लक्षण - स्पष्ट सबै सधैं छ?
आचरण कस्तो नियम अवस्थित? नियम को प्रकार